अाज पाकिस्तान र बंगलादेश खेल्दै, फाइनलमा भारतसँग को भिड्ला ? – Hamrosandesh.com
अाज पाकिस्तान र बंगलादेश खेल्दै, फाइनलमा भारतसँग को भिड्ला ?
यूएईमा जारी एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत फाइनल प्रवेशका लागि आज पाकिस्तान र बंगलादेश भिड्दै छन् । खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका सवा ५ बजे सुरु हुने छ । आजको खेलको विेताले शुक्रबार भारतसँग उपाधि भिडन्त गर्ने छ ।
पहिलो पटक सेमिफाइनलमा पुगेका चार टिमका बीचमा सुपर फोरको फरम्याटमा खेलाइएको हो । जस अनुसार सुपर फोरमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान भिडेका थिए । भारतले पाकिस्तान र बंगलादेशलाई पराजित गर्दै र अफगानिस्तानसँग बराबरी खेल्दै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरिसकेको छ ।
यसैगरी अफगानिस्तान प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ भने आज पाकिस्तान र बंगलादेश खेल्दैछन् । सुपर फोरको खेलमा पाकिस्तान र बंगलादेशले अफगानिस्तानलाई पराजित गरेका थिए भने भारतसँग दुवै टिम पराजित भएका थिए । त्यसैले पाकिस्तान र बंगलादेशको २-२ अंक रहेकाले आजको विजेता फाइनल पुग्ने छ ।